सुर्खेताँ निकै धनी मान्छे बस्दा रैछन् – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १५:२२ मा प्रकाशित
सुर्खेताँ निकै धनी मान्छे बस्दा रैछन् क्या ? कसैलाई अलि गारोसारो रोग लाग्यो टेम्पो रिजर्व गरेर माईकिङ्ग गरेर अनेकथरी फलाक्दै गाउँगाउँमा पैसा उठाउनेको विगविगि छ । सँगै आँफुलाई लाहुरेकी श्रीमती भनेर सापट माग्दै लाखौँ ठग्नेदेखि पुलिसको डिएसपी र सहायक सिडिओ भन्ने सम्मका जालझेलाँ सुर्खेतिहरुसित थुप्रै रकम उठाएर हिँडने गर्या सम्चार निकै आउन थाल्याछन् त ।
पुलिसका नामबाट ठग्नलाई त झन् सुर्खेताँ सजिलो रैछ क्या ? साँच्चैका पुलिसदेखि नक्कली पुलिस सम्मले सुर्खेताट कमाउनु कमाउँछन् भन्छन् । बेलाँबेलाँ हुने यस्ता घटनाले त झन् प्रमाणितै गर्याछ भन्दा फरक नपर्ला हैन र ? झापादेखि दैलेखाँ ससुराली बनाउन सफल निलम भट्टराईले यो पटक पुलिसको डिएसपीको नाममा दशैं खर्च गोडा पन्द्र १६ लाख उठाएछन् ।
झापाली मान्छे तगडै रहेछन् । झापादेखि सुर्खेत आएर ससुराली गाउँदेखि मामाससुराली गाउँसम्मका मान्छेलाई थला पारेर गएछन् । कहिले पत्रकार र कहिले पुलिस । अनि कहिले सिआईवी भनेर सुर्खेते र दैलेखेको आँखाँ छारो हाल्न सक्ने झापालीले खास्सै ठूलो काम त गर्या हैनन् । कस्ता कस्ता मैहुँ भन्ने स्याङ्जाली र ह्याङ्गजली सम्मको बुद्धि भुट्ने झापालीले दैलेख, सुर्खेत र बाँके बर्दियाट १५÷१६ लाख उठाउनु भन्या कुनै ठुलो कुरा हैन ।
कहिल्याट रकम जुटाउन हिन्याथे कुन्नि ? गको मंगलबार मात्रै सुर्खेतको पुलिसले पक्राउ गरेर मजाले पिलेन चढाएर काठमाण्डु पठायो भनेछि भट्टराईजीले अब राजधानीमै स्वागत सत्कार पाउनु हुनेभो । जमाना नी बडा डेन्जर आउन लायो गाँठे । पुलिसलाई तपाईं पुलिस होकी हैन परिचय पत्र देखाउनोस् भन्ननी नमिल्ने ?
नक्कली पत्ता लाउन खोज्दा पुलिसमाथि शंका गर्ने भनेर उल्टो डण्डा लाउला भन्ने पिर ! हुन त नक्कली र सक्कली, सामान्य जनताले काँ छुट्टाउन सक्छन र ? त्योभन्दा त बरु ज्यान जोगाउना लागि नी आँफुसितभा जिन्सि नगददेर पठाउनै बेस हैन र ? पुलिसलाई जनता रक्षक भनेर ढुक्कसित विश्वास गर्ने दिन नी गएछन् के ? यो सब कमाल भन्या गणतन्त्रकै त होला क्यारे हैन र ? गणतन्त्र आएसँगै कुलेलम ठोक्या विधिको शासन फर्केर नआउन्जेलसम्म यी आँखाले केके देख्नु पर्ने हो के के ? हाम्ले सुन्या पुराना कहावत अनुसार स्याङ्जाली नलागुन्जेल झापालीले मात्रै त त्यति दुख नदेलान् ।
तर भन्न सकिन्न तर यी पछिल्ला “लि“ ले गाउँघराँ आहानै बना हुनाले सतर्कचाइँ हुनैपर्छ । विगत केही वर्षदेखि अनेकन बहानाँ रुपियाँ माग्नेले सारै दुख्ख देकाछन् । यिनीहरुबाट नी सजग रहन त सिक्नैपर्ने हो हैन र ?